समाचारहरु – Page4– NQKhabar
विश्व क्रिकेट लिगः नेपाल VS युएई (LIVE) काठमाडौं, मंसिर २०– विश्व क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल) च्याम्पियनसिप अन्तर्गत सातौं चरणको पहिलो खेलमा अहिले नेपाल र युएईबीच खेल भइरहेको छ। आबुधावीको शेख जायेद रंगशालामा युएईले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरिरहेको छ। ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल र दिलिप नाथका साथ नेपाल..
प्रध्यापक संघ नेपाल र नेपाल आशिंक प्रध्यापक संघ बिच छलफल
नेपालगन्ज २० मंसिर /प्रजातान्त्रवादी प्रध्यापक संघ नेपाल र नेपाल आशिंक प्रध्यापक संघ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगंज ईकाई समिति बिचको छलफल बुधबार नेपालगंजमा सम्पन्न भएको छ ।प्रजातान्त्रवादी प्रध्यापक संघ नेपालका केन्द्रिय सचिव जनक रत्न मल्ल बाके आएको बेलामा उक्त भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमको..
युवा स्वयसेवक केन्द्र स्थापना
मधु पौडेल , बाँके । नेपालगंज शहरको चिनारी युवा स्वम सेवकको ठाउँ भनेर चिनाउने सन्दभ सगै युवा स्वयसेवक केन्द्र स्थापना भएको छ ।नेपालगंजको न्युरोडमा युवा स्वमसेवकको केन्द्र उद्घाटनको क्रममा सो कुराको उद्घोष भएको हो ।युएनडिपीको सहयोग र क्रियटिभ हेन्डस तथा युवा स्वम सेवकहरुको आयोजनामा भएको उक्त..
चितवनमा हाइअलर्टमा सुरक्षाकर्मी
चितवन,मंसिर १९- आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वानको सुरक्षाको लागि चितवन प्रहरीले मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीलाई हाईअलर्टमा राखेको छ । सम्पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था पूरा भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘काठमाडौँबाट आउनुभएका सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरेर यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुद..
तनहुँ । तनहुँ प्रतिनिधि सभा १ का बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले आइतबार व्यास नगरपालिका वडा नम्बर २, ३ र ४ मा घरदैलो सम्पन्न गरेका छन् । तनहुँ प्रतिनिधि सभा १ का उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान र प्रदेश सभा १ का उम्मेदवार रामबहादुर गुरुङ्गले घरदैलो गर्दै आफूलाई भोट मागेका छन् । एमाले तथा माओवादी..
प्रतिनिधि सभा चितवन क्षेत्र नं. २ का वाम उम्मेदवार पोख्रेल : हेर्नोस् चुनाव प्रचार प्रसारका ११ दृष्य र पढ्नोस् उनको १४ प्रतिवद्धता
शिशिर सिंखडा, भरतपुर- चितवन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका युवा नेता कृष्णभक्त पोख्रेल वि.सं. २०२४ साल असार २० गते चितवनको पार्वतीपुरमा जन्मिएका हुन् । हाल नेकपा एमाले चितवनको अध्यक्ष समेत रहेका पोख्रेल २०७० सालको निर्वाचनमा चितवनकै क्षेत्र नं. ३ बाट..
तनहुँ–१ बामपन्थीमय बन्दै
दमौली । तनहुँ प्रतिनिधि सभा १ बामपन्थीमय बन्दै जान थालेको छ । विभिन्न पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस लगायतका दलका कार्यकताए बाम गठबन्धनमा प्रवेश गर्न थालेपछि तनहुँ–१ बामपन्थीमय बन्न थालेको हो ।कांग्रेसका नेता एवं तनहुँ प्रतिनिधि सभा १ का उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले पटक–पटक यो चुनाव जितेपनि विकासमा..
कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी हो : पूर्वमन्त्री गुरुङ्ग
तनहुुँ । नेकपा एमाले प्रदेश संयोजक एवं पूर्वमन्त्री किरण गुरुङ्गले कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी भएको आरोप लगाएका छन् । तनहुँ प्रतिनिधि सभा २ प्रदेश सभा २ का उम्मेदवार समेत रहेका गुरुङ्गले शुक्रबार रिसिङ गाउँपालिका–५ पिपलटारमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सत्ताका निमित्त देशलाई पटक–पटक बन्धकी..
सन् २०१८ मा रसियामा आयोजना हुने विश्वकपको ड्र सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ड्रमा साबिक विजेता जर्मनी समूह एफमा परेको छ । जर्मनीसँगै मेक्सिको, स्वीडेन र दक्षिण कोरिया रहेको छ । इंग्ल्याण्ड समूह जीमा रहेको छ । इंग्ल्याण्डले बेल्जियम, पानामा र ट्युनियालाई प्रतिद्वन्द्वी पाएको छ..
माडीमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नक्कली बम
सुवास लामिछाने चितवन । माडीमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नक्कली बम भएको पुष्टी भएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिती नजिकिदै गर्दा माडीमा नक्कली बम फेला परेको हो । माडी नगरपालिका ४ सिधुवाचोकदेखी तीन सय मिटर पश्चिममा वाटोको छेउमै सो वस्तु राखिएको थियो । काटुन भित्र सिसाको वोत्तलमा तार..